जंगलि च्याउ खाँदा बि’रामी परेका एकै घरका तीन जनाको मृ’त्यु ,गाँउनै शो’कमा ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/जंगलि च्याउ खाँदा बि’रामी परेका एकै घरका तीन जनाको मृ’त्यु ,गाँउनै शो’कमा !
जंगलि च्याउ खाँदा बि’रामी परेका एकै घरका तीन जनाको मृ’त्यु ,गाँउनै शो’कमा !
जाजरकोट– च्याउको तरकारी खाँदा ग’म्भीर बि’रामी परेका जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–१ स्याँक्रीका एकै घरका तीन जनाको आज मृ’त्यु भएको छ ।
यसअघि सोमबार गाउँमै एक जनाको मृ’त्यु भएको थियो । गत साउन ९ गते जङ्गलबाट च्याउ टिपेर घरमा ल्याई पकाएर खाएका टेकबहादुर चलाउनेसहित परिवारका आठ जना बि’रामी परेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतमा उपचारको क्रममा टेकबहादुरकी १६ वर्षीया छोरी औसरा, १३ वर्षीया छोरी धनसरा र ११ वर्षीया नातिनी निरुता चलाउनेको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डाक्टर केएन पौडेलले बताउनुभयो ।
चलाउनेकी ३ वर्षीया छोरी अञ्जनाको सोमबार गाउँमै मृ’त्यु भएको थियो । विषालु च्याउ खाएर ग’म्भीर बि’रामी भएका सात जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सोमबार नै सुर्खेत लगिएको थियो । बि’रामी परेका एकजनाको अवस्था ग’म्भीर रहेको र तीनजनाको अवस्था सामान्य रहेको डा पौडेलले बताउनुभयो ।
“ढिलो गरी अस्पताल ल्याएको हुँदा च्याउको वि’षले धेरै असर गरिसकेको रहेछ जति कोसिस गर्दा पनि बचाउन सकिएन”, डा पौडेलले भन्नुभयो, “विषले शरीर वि’षाक्त बनाइसकेको थियो ।” उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदै गर्दा अञ्जनाको मृ’त्यु भएको हो ।
घरमूली ५० वर्षीय टेकबहादुर चलाउने, ३० वर्षीय छोरा ललित, ३० वर्षीय बुहारी कल्पना, छोरी पशुपतिको सुर्खेतमै उपचार भइरहेको छ । गाउँपालिकाले निजी खर्चमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर बिरामीको उद्धार गरेर सुर्खेत पु¥याएको हो । वडा नं १ मा स्वास्थ्यचौकी नहुँदा निजी औषधि पसलमा लिएर उपचार गर्दा बि’रामीले उपचार पाएका थिएनन् । बि’रामी भएको तीन दिनपछि मात्र उपचारका लागि हेलिकप्टरमा उ’द्धार गरिएको थियो ।
गरिबीमा डुबेका टु’हुराकाे व्यथा : भोक लागे माटो, जाडो हुँदा आगो र घाम तापेर गुजारा